3000 Sannad Tattoo ah Mummy Tummoo - Fikradaha Art Art
3000 Sanad Tattoo ah Mummy
Sonitattoo July 5, 2016
3,000 Hooyo jir ah oo gaboobay ayaa lagu daboolay tattoos qarsoon. Hooyo, oo laga helay tuulo la yiraahdo Deir el-Medina, Masar, waxay ahayd marwalba haweeney ku faraxsaneyd in ay indho-bexeen indhaha, garbaha, iyo gadaasheeda, ubaxyada lafaha, iyo sacabka gacanta.
Tattoos ku saabsan qoorta hooyada
Hooyo ayaa laga helay tuulada Deir el-Medina. Fiiro gaar ah in shaati-galada qaarkood ay muuqdaan indhaha qaawan, laakiin qaar kale waxay ku jiraan qaybo jirka ka mid ah oo la madoobaaday shinni loo isticmaalo mummified.
Isticmaalka sawir-maskaxeedka infrared, cilmi-baariste Ghada Darwish Al-Khafif wuxuu awood u lahaa inuu arko tattooqaddan laba sac, oo ka dhigaya godadka Hathor. Waxay sidoo kale u isticmaashaa qaab-dhismeed digital-ka ah si loo magdhabo sawir-qaadista sawir-kicinta ay sababtay burburinta maqaarka mummuur.
Khabiir ku takhasusay "Ghada Darwish Al-Khafif" wuxuu isticmaalaa sawirrada infrared si uu u arko shaatiinka maqaarka haray.
Akhri sheekada oo dhan halkan
tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahshimbir shimbirkoi kalluunkatattoo dheemantattoos cagtatattoos eagletattoos qoortawaxaa la dhajiyay tattoostattoos sleevelibto libaaxTattoo FeatherJoomatari Tattoostattoos ubaxtattoo tilmaansawirada malaa'igtatattoo biyo ahtattoos qabaa'ilkawaxay jecel yihiin tattoosfikradaha tattoolammaanahahenna tattooDhaqdhaqaaqataraagada kubbaddaTartoo ubax badantattoos taajkiilaabto laabtatattoo ah octopusgadaal u laabotattoos iskutallaabtaTattoo infinityarrow Tattootattoos moonTilmaamta jaalaha ahshaatiinka shiidantattoos qorraxdasawir gacmeedku dhaji tattoosnaqshadeynta mehndisawirrada raggatattoos gacantajimicsiga bisadahamuusikada muusikadatattoo maroodigatattoo indhahasawirada gabdhahatattoos qosol lehtattoos saaxiib saxa ahgaraacista gacmahaTattoos Wadnaha